Football Khabar » ३८ वर्षीय ज्लाटन युरोपियन फुटबलमा फर्किंदै : एसी मिलान नयाँ गन्तव्य !
३८ वर्षीय ज्लाटन युरोपियन फुटबलमा फर्किंदै : एसी मिलान नयाँ गन्तव्य !
स्वीडेनका भेट्रान फुटबलर फरवार्ड ज्लाटन इब्राहिमोभिच पुनः युरोपियन फुटबलमा फर्किने सम्भावना बढेको छ । हाल ३८ वर्ष पुगेका उनलाई इटालीको क्लब एसी मिलानले अनुबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ । मिलान ज्लाटनको पूर्वक्लब हो । जहाँ उनले सन् २०१० देखि २०१२ सम्म बिताएका थिए ।
सन् २००९ मा बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएका उनलाई पछि बार्सिलोनाले एक सिजन लोनमा मिलान पठाएको थियो । जहाँ उनले सिजन २०१०–११ लोनमा बिताएर अर्को सिजन मिलानले स्थायी रूपमै भित्र्याएको थियो । त्यसपछि उनी फ्रेन्च क्लब पिएसजी पुगेका थिए ।
पिएसजीमा सन् २०१२ देखि २०१६ सम्मा गरी ४ वर्ष बिताएका उनी त्यसपछि इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पुगे । त्यहाँ उनले दुई बिताएर सन् २०१८ मा अमेरिकन क्लब एलए ग्यालेक्सीमा अनुबन्ध भएका थिए । सो क्लबका लागि उनले ५६ खेलबाट ५२ गोल गरेका थिए ।
उमेरले ३८ पुगेर पनि व्यावसायिक फुटबलमा सक्रिय रहेका ज्लाटन अहिले पुनः युरोपिन फुटबलमा फर्किन लागेका हुन् । केही समयअघ उनले आफू पुनः स्पेनिस ला लिगा खेल्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । तर, उनलाई स्पेनका क्लबले चासो नदिएपछि उनी पूर्वक्लब मिलान जान लागेका हुन् ।
हाल ग्यालेक्सीमा रहेका ज्लाटनको २०१९ को समाप्तिसँगै सम्झौता सकिँदैछ । र, जनवरी विन्डोमै उनलाई मिलानले अनुबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १४:०२